तिथि मेरो पत्रु »6कारण आफ्नो सेल फोन तल रखो
द्वारा एरिका लुप
तिमी शहर मा फैशनेबल नयाँ ठाउँमा एक candlelit खाने समयमा केटी वा आफ्नो सपना को मान्छे देखि भर बसिरहेका छौं. आफ्नो फोन आफ्नो मित्रहरुलाई देखि पदहरू संग उडाने सुरु सम्म सबै एक royally रोमान्टिक तरिकामा साथ रोलिंग छ, बहिनी र पनि आमा - यो सबै जा गर्नुपर्छ वा यस यदि "। एक" तपाईं दुई विकल्प कसरी सोधेर: मौनताले घन्टी, दूर फोन राखे र आफ्नो तिथि मा नभएसम्म यसलाई बेवास्ता वा तपाईं मा आउनुहुनेछ कि हरेक सन्देश जवाफ दिन सक्नुहुन्छ. के तपाईं मात्र मिति बर्बाद छैन को जोखिम चलाइराख्नु पछि चयन भने, तर पनि यो अहिले-चोट लागेको व्यक्ति भविष्यमा रोमान्स को संभव संभावित.
किन तपाईं एक तिथि समयमा आफ्नो सेल फोन तल राख्नुपर्छ, र कसरी भविष्य सफलता को आफ्नो अवसरहरुमा माथि यसो गर्न सक्छन्? विचलित डेटिङ सम्बन्ध Ender छ किन छ कारणहरू मा एक नजर राखन र तपाईं आसपास आफ्नो प्रविधी भरिएको प्रेम जीवन बारी गर्न के गर्न सक्छन्.
उहाँले पूर्ण रूपमा केहिपनि जस्तो तपाईं उहाँलाई महसुस बनाउने छौं. त्यहाँ घनिष्ठ परिवार सदस्य अस्पताल लगिएको गर्नुपर्छ रूपमा एक टड्कारो आकस्मिक यस्तो छ वा जबसम्म आफ्नो मालिक तपाईं आफ्नो इमेल फर्कने छैन भने तपाईं आगो खतरा छ, आफ्नो फोन गर्न आफ्नो मिति देखि आफ्नो ध्यान हटान सानो कारण त्यहाँ. बरु सम्पूर्ण साँझ लागि आफ्नो मिति अनुहारमा सट्टा पर्दा घूर को, तिम्रो फोन राखे र उहाँलाई आफ्नो पूर्ण ध्यान दिन.
त्यो तपाईं आफ्नो मा बस हुनुहुन्न सोच्न सक्छन्. के तपाईं साँच्चै बरु फेरि कुरा कहिल्यै कसैसित एक तिथि मा हुनुहुन्छ भनेर कल्पना गर्नुहोस्. तपाईं के? आफ्नो जवाफ नजिकै कहीं पतन हुन्छ भने श्रेणी "उनको कुनै ध्यान" - तपाईं एक विचलित मिति जब तपाईं गरिरहनुभएको ठ्याक्कै के हो. तपाईं वास्तवमा आफ्नो मिति uber-अचम्मको छ कि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो कली खोल्नको छौं तापनि, त्यो तपाईं मा शून्य रुचि छ कि एक संकेत को रूप आफ्नो कामको लिन सक्छ उनको.
तपाईं खराब हेर्न. तपाईंको आमाले आफ्नो गरिब बेहोरा के भन्नुहुन्छ? एक परिवार को खाने मा तपाईं हुनुहुन्छ भनेर ढोंगी, र उचित तालिका शिष्टाचार सोच्न. तपाईं पनि बिल्कुल मिस बेहोरा भने 100 समय प्रतिशत, यस गर्न-के तपाईं पालन गर्नु छ.
कुराकानी एक दुई-तरिका सडक छ. पहिलो केही तिथिहरु तपाईं र तपाईंको संभावित नयाँ साथी बस प्रत्येक अन्य चिन्नुको हुँदा एक समय प्रदान. निरन्तर आफ्नो सेल मा glancing, यो सही तपाईं को सामने भइरहेको गर्नुपर्छ भनेर लाइभ कुराकानी गर्न आउँदा इमेल स्वीकारिरहेका वा आफ्नो मित्रहरुलाई टेक्स्ट प्रमुख आगोले सिध्यायो हाल्छ. उहाँले आफ्नो Beagle व्यवहार किनभने यो आफ्नो बच्चा वास्तवमा आफ्ना पाल्तु जनावर लागि आफ्नो प्रेम विषयमा कुरा भन्दा राम्रो छ जस्तो आफ्नो मिति "धेरै राम्रो" छ कि आफ्नो BFF बताउन भने आफैलाई सोध्नुहोस्.
तपाईं एक छैन-यति-राम्रो पहिलो छाप बनाउने छौं. यो डेटिङ पूल सम्म र व्यापक पुग्छ, र आफ्नो ठाउँ लिन अर्को माछा सधैं त्यहाँ. पहिलो मिति मा एक गरिब छाप बनाउने तिमी को हो मा आफ्नो क्षमता साथी विचार रंग संभावना छ र त्यो फेरि तपाईं संग बाहिर जान भने. त्यो तपाईं खर्च हेरिरहेका पछि दोस्रो मिति "हो" भन्न जा रहेको छ 30 बाहिर आफ्नो 45 मिनेट खाने टेक्स्ट? यो संभावना छैन.
जडान मान्छे द्वारा गरिन्छ, र छैन प्रविधिको. तपाईं अनलाइन र पहिलो भेट हुन सक्छ जबकि पाठ मार्फत "कुरा", तपाईं वास्तविक मानव-गर्न-मानव अन्तरक्रिया आवश्यकता साँचो प्रेम सम्बन्ध बनाउन. आफ्नो फोन उठयो पनि आफ्नो मिति नै गर्न स्वतन्त्र शासनको दिन्छ. आफ्नो मिति समयमा अन्य मानिसहरूलाई बताउनु प्रत्येक अन्य संग एक जडान बनाउन देखि तपाईं distracts.